वासिङ्टन डिसी, अमेरिका । गैरआवासीय नेपाली संघ, अमेरिकाको आँकडाअनुसार अढाई लाख आप्रवासी नेपाली भनिएको अमेरिकामा पछिल्ला वर्ष एनआरएन मजबुत र संस्थागत हुन थालेको पूर्व नेतृत्व तथा स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले बताएका छन् । एनआरएन नेतृत्वको सक्रियताका कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाको एनआरएनलाई नेपाल सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणसमेत फेरिएको बुझिएको छ । नेपाल सरकारले न्यूयोर्कमा कर्मचारीसहितको छुट्टै कन्सुलेट कार्यालय स्थापना गरेर उक्त कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ ।
वर्षांैदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली नियोग कार्यालयको एक कुनामा खुम्चिएको कन्सुलेटलाई एनआरएनकै सक्रियतामा छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्न सम्भव भएको थियो भने यसै वर्षदेखि पश्चिम तटीय क्षेत्र क्यालिफोर्नियामा पनि कन्सुलेट कार्यालयको सेवा शुरु भइसकेको छ । अवैतनिक वाणिज्य दूत ऋषि ढकाललाई पदोन्नति गरेर क्यालिफोर्निया क्षेत्र हेर्ने गरी नेपाल सरकारले अवैतनिक महावाणिज्य दूत बनाएको छ । अवैतनिक महावाणिज्य दूत ऋषि ढकाल एनआरएन अमेरिकाका सल्लाहकार हुन् । उक्त व्यवस्थापछि त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुले राहदानीका लागि न्यूयोर्क र डिसी धाउनुपर्ने छैन भने भिसा सेवासमेत सहज भएको छ । डा. केशव पौडेल नेतृत्वमा आइसकेपछि सदस्यता संख्यासमेत ह्वात्तै बढेको प्रतिक्रिया दिँदै डा. पुरु श्रेष्ठ भन्छन्– युवाहरुको पनि चासो बढेको छ । पछिल्लो कार्यकालमा एनआरएन अमेरिकाले यहाँ मात्र होइन नेपालमा समेत धेरै महत्वपूर्ण काम गरेको छ । नेपालमा महाभूकम्प जाँदा एनआरएन अमेरिकाले गरेको सहयोग र भूमिका निकै महत्वपूर्ण रह्यो । तर, विडम्बना काम गर्नेलाई स्वतःस्फूर्त काम गर्ने वातावरण नदिएको हो कि जस्तो देखियो, मुद्दा–मामिलाहरु एनआरएन अमेरिकामा देखियो । एनआरएन अभियन्ता पनि भएको नाताले भन्नुपर्दा संस्थागत स्वरुपमा बिस्तारै झांगिदैं गएको एनआरएन अमेरिकालाई सबै मिलेर अझ बलियो बनाउन आवश्यक देखेको छु । नेपाल र यहाँ दुवै ठाउँमा सहयोग गर्न सक्ने संस्था बनाउन सबै एक हुनु जरुरी छ ।